Shabakada Alshahid | Archive | Islaamka
Home » Archives by category » Maqaallada » Islaamka
Dalalka Islaamka oo arrimaha Somalia ku lafa-guraya Shir ay berrito yeelanayaan
Jabuuti (Alshahid)- Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Islaamka ayaa maalinta berrito Shir ku yeelanaya wadanka Jabuuti, iyadoo Shirkaasina looga hadli doono arrimo ay ku jirto Xaaladda Somalia. Wasiiradda arrimaha dibadda ee Somalia Marwo. Fowziya Yuusuf Xaaji ayaa Somalia ku matalaysa Shirrkan,waxayna maanta ka ambabaxday dalka si ay usii tagto halka Shirku uu ka dhici doono. [...]
Somalia iyo u diyaar-garowga Ciidul-Adxaha (Warbixin)
Somalia (Alshahid)- Iyadoo maalinta berrito ah ay noqon doonto haduu Eebe idmo maalinta ugu horeysa ee Ciidda Carafo ama Ciidul-Adxaha ayaa waxaa si wayn looga dareemayaa Dunida Muslimka ah dhaq-dhaqaaqyo loogu diyaar garoobayo maalintan qiimaha leh. Dalka Somalia oo Aduunyada Islaamka ka tirsan waxaa uu qaybtiisa ka qaadanayaa isu-diyaarinta soo dhawaynta Ciidda. Iyadoo Wararka aan [...]
Mid Ka mida Jilayaashii Filimkii lagu xumeeyay Sharafta Nabigeena oo la jah-wareersan fariimo hanjabaad ah
USA (Alshahid)- Haweeney u dhalatay dalka Mareykanka kana mid ahayd Jilayaashii Filimkii lagu xumeeyay Sharafta Nabigeena Muxamed (NNKH) ee dhawaan la sameeyay ayaa waxay sheegtay inay fariimo is-daba joog oo xambaarsan hanjabaad ay la kulmeysay tan iyo markii Filimkaas uu ku faafay Caalamka. Mrs. Sydney Jersiya ayaa ku adkeystay inay Maxkamad lasoo koreyso ninkii lahaa [...]
Sheikh Nureyn Imam Al-Xaatimi oo ka mid ahaa Cullimada ugu waa-wayn deegaanka Baraawe oo geeriyooday
Mombasa (Alshahid)- Galabnimadii Shalay ayaa waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku geeriyooday Sheikh Nureyn Imam Muxamed Al-Xaatimi oo ahaa Imaamka iyo Khadiibka Xarunta Islaamiga ah ee Sheikh Nuureyn oo ku taala magaalada Mombasa. Sheikha ayaa Illahay ha u naxariistee wuxuu geeriyooday isagoo ku sugnaa Garoonka diyaaradaha Joma Kinyata ee magaalada Nairobi, waqtigaas oo uu [...]
September 26, 20123 CommentsRead More
Aqriso Bayaan ka hadlaya xulitaanka Baarlamanka cusub oo kasoo baxay Hay’adda Cullimada
Mogadishu (Alshahid)- Hay’adda Cullimada Soomaaliyeed ayaa soo saartay Bayaan ay kaga hadlayso sida ay u socoto howsha soo xulista Xildhibaanada cusub ee Baarlamanka dalka. Iyadoo Hay’adduna ay hoosta ka xariiqday inuu jiro walaac xoogan oo laga qabo howshaasi iyo inaanay sidii dalka iyo dadkaba u dan ahayd u soconayn. Hay’addu waxay Bayaankeeda kusoo bandhigtay dhowr [...]
Gole Islaami ah oo ku baaqay in la taageero dadka Soomaaliyeed
Dubai (Alshahid)- Guddiga gargaarka guud ee ka tirsan Golaha Islaamiga Caalamiga ah ee Dacwadda iyo gargaarka ayaa cusbooneysiiyay baaqiisa ku wajahan Ururada hoos taga golaha si loogu dag-dago gacan siin bani’aadaminimo oo loo fidiyo dadka ku dhibaataysan Abaarta iyo Gaajada ku dhufatay goobo ka tirsan Soomaaliya. Guddiga ayaa shaaca ka qaaday inay maalinba maalinta ku [...]
Aqriso qodobadii kasoo baxay Shir ay dhawaan yeesheen hay.adda Cullimada dalka
Mogadishu (Alshahid)- Dhawaan waxaa magaalada Muqdisho Shir ku yeeshay hay’adda Cullimada Soomaaliyeed, waxayna ka hadleen Shirwaynihii ansixinta dastuurka ee soconayay oo ay qodobbo ku wajahan soo saareen. Hadaba waxaan halkan idinkugusoo gudbinaynaa tallooyinkii iyo baaqyadii kasoo baxay hay’adda Cullimada ka dib Shirkoodii dhacay. . Baaq iyo talooyin ku socda Bulshada soomaaliyeed Gaar ahaan Ergada ansixinta [...]
Xarakada Islaax oo Xilkii ka Qaaday Dr. Cali Baashi, Ganaaxdayna Dr. Cali sh. Abubakar
Alshahid (Hargaysa) – War Murtiyaad ka soo baxay subaxnimada saakay shir ay ku kulansanaayeen madaxda Xarakada Islaax ayaa lagu sheegay in xilkii laga qaaday masu’uulkii ururka Dr. Cali Bashi Cumar, isla markaana ganaax lagu soo roogay Dr. Cali Sh. Abubakar gudoomiyihii hore ee ururka iyo madaxa Jaamacadda Muqdisho, oo xubinimadiisii xarakada hakad la geliyay. Bayaanka [...]
Sahara Obama “Waxaan Allah ka baryay in Madaxweyne Obama uu soo Muslimo”
Nairobi (Alshahid)-Sahara Obama, Madaxweyne Barrack Obama ayeydiis ayaa sheegtay inay ugu ducaysay Madaxweynaha Maraykanka inuu soo galo Diinta Islaamka. Sahara Obama ayaa sanadkan kamid ahayd xujayda gudatay xajka, waxaana ay waraysi sii say wargeys kasoo baxa dalka Sucuudiga oo lagu magacaabo Al-Watan Saudi daily. “Waxaan ku ducaystay in wiilka aan ayeyda u ah ee Barrack [...]
November 26, 20106 CommentsRead More
Wargeys kasoo baxa Koonfur Afrika oo sawir gacmeed Nabi Maxamed NNKH daabacay
Johannesburg (Alshahid)-Wargays todobaadle ah oo kasoo baxo dalka Koonfur Afrika ayaa Jimcihii shalay soo daabacay sawir gacmeed (Cartoon) ay ku sheegeen inuu yahay Nabi Maxamed naxariis iyo nabad galyo korkiisa ha ahaatee sawirkaasi oo aad uga caraysiiyay Muslimiinta ku dhaqan Koonfur Afrika. Wargayska oo lagu magacaabo Mail & Guardian ayaa sawiray muqaal ay ku sheegeen [...]
May 22, 20102 CommentsRead More